स्याङजामा लागुऔषध प्रयोगकर्ता दुई जना पक्राउ
श्रीकृष्ण सिग्देल/स्याङजा । लागु औषध सेवन सहित ओसारपसार गरेको अभियोगमा वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले दुई जनालाई पक्राउपछि सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीको नियमित गस्तिको टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा वालिङ ६ कालीमाटी बाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका ३ बस्ने बर्ष २८ को श्रीलाल विक र पोखरा महानगरपालिका ६ बस्ने बर्ष […]
त्रिशुली नदिमा बस खस्दा पाँच जनाको मृत्यु, २३ जना घाइते
चितवन । चितवनको चुम्लिङटारबाट त्रिशुली नदिमा बस खस्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २३ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा ३ जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन् । काठमाडौंबाट पोखरा जांदै गरेको ना ६ ख २५०६ नम्बरको बस इच्छाकामना गाँउपालिका ३ चुक्लिङटारबाट त्रिशुली नदिमा खसेको हो । सडक छेउमा धोएर निकाल्दै […]
नेपाल भित्रियो निगमको दोस्रो वाईड बडि बिमान
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको दोस्रो जहाज एयरबस ३३० ‘मकालु’ नेपाल भित्रिएको छ । विमान ल्याउन निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारसहितको टोली फ्रान्स पुगेको थियो । फ्रान्सको तुलुजबाट करिब ८ घण्टाको उडानपछि उक्त विमान काठमाडौं आइपुगेको हो । बिहिवार बिहान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा उक्त बिमानलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव कृष्ण देवकोटा लगायतले […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्रिय इमानका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ६ महिने आधारभूत प्रशिक्षण पूरा गरेका अधिकृत तहका नयाँ कर्मचारीको ललितपुरमा आज भएको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निष्क्रिय इमानदारिताले जनताकोे सेवाका लागि कुनै लाभ नहुने बताउनुभयो । सक्रियता र इमान्दारीताका साथ काम गर्न उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो […]
३० जना भन्दा बढी डा. केसी समर्थक प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौ । डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट बालुवाटारसम्म ¥याली निकाल्न खोजेका डाक्टर तथा विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अस्पतालबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण ¥यालीलाई प्रहरीले मुल गेटमै रोकेर ३० भन्दा बढिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सरकार डा. केसीको माग पुरा गर्न तयार नभएको भन्दै विरोधस्वरुप टिचिङ अस्पतालबाट बालुवाटारसम्म ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो । […]
प्रदेश पाँचमा छ वटा संसदीय समिति
रूपन्देही । प्रदेश ५ प्रदेशसभाका छवटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध चयन भएका छन् । मंगलबार र बुधबार भएका मनोनयनमा सबै समितिमा सभापति पदका लागि एक÷एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि सबै निर्विरोध चयन भएका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा नेकपाका दधिराम न्यौपाने र भौतिक पूर्वाधार […]
जथाभावी खोलेका शिक्षण संस्थाका कारण समस्या– प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययन नगरी जथाभावी खोलिएका शिक्षण संस्थाका कारण योग्यताको प्रमाणपत्र व्यक्तिका पीडाको विषय भएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको दशौँ सभालाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले जथाभावी खोलिएका शिक्षण संस्थाका कारण योग्यताको प्रमाणपत्र व्यक्तिका लागि गौरवभन्दा पनि पीडाको विषय भएको बताउनुभएको हो । उहाले शिक्षणा […]
काठमाडौं । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मंगलबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चर्तिकला देखाए । थाइल्याण्ड जान लागेका उनी विना पासपोर्ट एअरपोर्ट पुगेर विमानस्थलका कर्मचारी र उनी सवार हुन लागेको थाइ एअरवेजका कर्मचारी माथि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्दै चर्चिकला देखाएका हुन् । विमान उड्नुभन्दा १० मिनेट अघि मात्र एअरपोर्ट पुगेका उनले सुरुमा काउन्टरमा बाजाबाज […]
रुँदै राजीनामा दिए कानूनमन्त्री तामाङले
काठमाडौँ । बंगलादेशमा अध्ययन गर्ने नेपाली छात्राहरुप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले बोलेका शब्दहरुप्रति क्षमा माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सामान्य कमीकमजोरीलाई मूल विषय बनाएर दुष्प्रचार गरिएको भन्दै दुख प्रकट गर्नुभयो । निकै भावुक हँुदै तामाङले निरन्तर नेपाली नारीहरुको सम्मानमा अगाडि बढिरहेको भन्दै बिरोधीहरुले नारीकै विषयमा […]
सिण्डिकेटधारी व्यवसायीको बैंक खाता फुकुवा
काठमाडौं – यायायात व्यवसायी समितिका खाताको रकम निकासाका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै समितिहरुले खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले खर्च पेस गरेको विवरणका आधारमा खाताको रकम निकासा दिइने बताएको छ । सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, मृतकको राहत, कर्मचारीको तलबसहितको सेवा […]